Wasiir ku xigeen arimaha dibada DKMG oo ka warbixiyay shir uu kaga qaybgalay Koonfur Korea – SBC
Wasiir ku xigeen arimaha dibada DKMG oo ka warbixiyay shir uu kaga qaybgalay Koonfur Korea
Posted by Webmaster on December 18, 2011 Comments
C/raxiim Cabdi Abiikar oo ah wasiir ku xigeenka wasaarada arimaha dibadda DKMG somaliya ayaa SBC uga warbixiyay shirar caalami ah oo uu uga soo qayb galay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka koonfur Korea .
Wasiirka ayaa sheegay in shirkan looga hadlayay sidii deeqaha ay bixiyaan wadamada caalamku ay u noqon lahaayeen kuwo wax ku ool ah, wadamadii ka soo qayb galay shirwaynahan waxaa kamid ah ahaa Maraykanka,Ruwanda, Itoobiya iyo wadamo kale waxana mudadii uu socday si wayn looga hadlay waxyaabihii u qabsoomahay wadamada deeqaha bixiya shirarkoodii u dambeeyay ee ay ku yeesheen wadamada fransiska ,iyo Talyaniga , halka shirkan u dambeeyana uu ka dhacayay koonfur korea .
Sidoo kale shirkan ayaa mudadii uu socday waxaa looga hadlay sidii wadamada dhaqaalohoodu soo korayo ee ku yaal qaarada Asia ay uga qayb qaadan lahaayeen sidii ay kaalmooyin u gaarsiin la haayeen wadamada dhaqaalahoodu uu liito .
Wasiirka ayaa sheegay in qodobka ugu muhuuimsanaa ee looga hadlayay shirkan uu ahaa sidii deeqaha ay bixiyaan wadamada caalamka looga faa’idaysanlahaa si ay u noqdaan kuwo waxtar u leh bulshada .
Wasiir C/raxiim ayaa sheegay in mudadii uu socday shirkan ay sidoo kale ay xukuumad ahaan ay la kulmeen wadamada Denmark, Koonfur korea , Koonfurta sudan waxana uu sheegay in kulankaas ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah oo wax loogu qabanayo somaliya iyo wadamo kale.
Waiir ku xigeenka ayaa sheegay in mudadii uu socday kulankan ay si wayn uga hadleen sidii deeqaha loogu talagalay somaliya ay si toos ah u soo gaari lahaayeen iyagoo aan soo marin gacmo kale si loo arko horumarka uu wadanku samaynayo.
Shirkan mudadii uu socday waxaa si wayn looga dooday sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka oo mudo dheer ay haysteen caqabado xaga amniga ah laakiin wasiirka ayaa sheegay in kulankaas lagu soo hadal qaaday sidii nabad loogu soo dabaali lahaa somaliya maadaama ay nabadu wax walba oo horumar ah ay u tahay furaha koowaad .
C/raxiin oo ah wasiir ku xigeenka arimaha dibadda DKMG ayaa sheegay in mudadii uu socday shirkan ay isaga iyo wafdigii la socday ay si wayn uga hadleen sidii dhaqaalaha loogu talagalay somaliya si toos ah loo soo gaarsiin lahaa iyagoo sheegay in iminka xaalada amaan ee dalka ay wax wayn iska badaleen marka loo eego siduu ahaan jiray amniga iyo kala dambaynta dalka .
Wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa shirkan looga hadlayay sidii deeqaha ay bixiyaan wadamada caalamku ay u noqon lahaayeen kuwo waxtar ah waxay uga qayb galeen magaalada Busan ee dalka koonfur korea waxana uu sheegay wasiirku in shirkaas uu ku soo dhamaaday is afgarad buuxa .
Xasan Cabdi Fraey(Xasan Gentleman)